ထမင်းလွတ်ဟင်းလွတ်နဲ့ဗိုက်ကားစေမယ့် ဆူရှီလေးတွေကို ဈေးတန်တန်နဲ့စားနိုင်မယ့်ဆိုင်လေး – FoodiesNavi
ထမင်းလွတ်ဟင်းလွတ်နဲ့ဗိုက်ကားစေမယ့် ဆူရှီလေးတွေကို ဈေးတန်တန်နဲ့စားနိုင်မယ့်ဆိုင်လေး
By yin sandi On June 1, 2018 0
ထမင်းစားချိန်တွေမှာ ? ? သွားရည်စာစားချင်လာပြီဆိုရင် ဗိုက်ကြီးတင်းကားသွားအောင်ဝယ်စားဖို့က မလွယ်ဘူးရယ်။ ? ? ဒီတော့သွားရည်စာအနေနဲ့စားလို့ကောင်းသလို ထမင်းလွတ်ဟင်းလွတ်အဆာခံနိုင်တဲ့ ? ? ဆူရှီလေးတွေစားတာ ? ? အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဆူရှီဆိုတာမျိုးကလည်း အမျိုးအမည်တွေစုံလွန်းလို့ ? ? ဘယ်နှခါစားစားရီုးမသွားနိုင်တဲ့အမျိုး ? ဒီတစ်ခါဂဏန်းဗားရှင်းလေးစားလိုက် ၊ နောက်တစ်ခါ ဝက်သားဗားရှင်းလေးစားလိုက်နဲ့ မင်မင်ကတော့ခုထိကို အမယ်မစုံနိုင်သေးဘူးကွယ်။ ? ရန်ကုန်မှာကတော့သိတဲ့အတိုင်း ဆူရှီဆိုင်တွေက ဗုံးပေါလအောပါပဲ။ ဂျပန်စတိုင် ကိုရီးယားစတိုင်ဆိုပြီး အရသာမျိုးမျိုးတွေကွဲထွက်နေပေမယ့် ? မြန်မာတွေရဲ့လျှာခံတွင်းကလည်း အထူးအဆန်းကြီးကွယ် အရသာလေးနက်ပေါ်လွင်နေမှ ခံတွင်းတွေ့တတ်တာဆိုတော့ မင်မင်စားခဲ့တဲ့ ဆူရှီဆိုင်လေးဆို ဆူရှီခရေဇီလေးတွေနဲ့ ခံတွင်းချင်းထပ်တူကျမယ်ထင်လို့ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မင်မင်စားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ ? အနော်ရထာလမ်းမပေါ် ၊(၄၇)လမ်း စီးတီးမတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်အခြမ်း ၊ ပါရဂူဆေးရုံနားက Ichiban Japanese Restaurant ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်လေးကတော့ တော်တော်လေးကျဉ်းတယ်။ ဒါပေမယ့်နေရာနဲ့မလိုက်အောင် နံရံလေးတွေမှာ ဝါးအိမ်ပုံစံမီးဆိုင်းလေးနဲ့ ရုပ်သေးလေးချိတ်ဆွဲထားပြီး နံရံကပ်လေးပေါ်မှာ အရုပ်ပုစိကွလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ပေးထားတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီးထိုင်ချင်စဖွယ်လေး။ ဆိုင်ကအပေါ်ထပ်လည်းရှိသေးပေမယ့် မင်မင်တို့သွားတဲ့အချိန်မီးအဆင်မပြေလို့ တက်တော့မစပ်စုခဲ့ရဘူးရယ်။
Ichiban မှာရနိုင်တာတွေကတော့ ဆူရှီအမျိုးပေါင်းရာကျော်နဲ့ ဂျပန်စတိုင်ဟင်းလျာတွေတော်တော်များများရနိုင်ပါတယ်။ ဆူရှီတွေကတော့ (၁၃၀၀)တန်လောက်စပြီး (၂၂၀၀)လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ဈေးကတော်တော်ကြီးတန်တယ် ? ဟင်းလျာတွေကတော့ (၂၀၀၀)တန်လောက်ကစပြီး (၆၀၀၀)လောက်ထိရှိတယ် ။ ဆူရှီတွေရော ဟင်းပွဲတွေရောများလွန်းလို့ အကုန်လုံးပြန်ပြီးရှယ်မပေးနိုင်ပေမယ့် မင်မင်စားခဲ့တာတွေကိုတော့ ကောင်းမကောင်းလေးဝေဖန်ပေးမယ်နော်။
Ichiban မှာ မင်မင်အခိုက်ဆုံးကတော့ ဂဏန်းချောင်းရေညှိကပ်ကြော်ပါပဲ။ ? နဂိုဓာတ်ခံကိုက အကြော်အလှော်လေးတွေပိုကြိုက်လားတော့မသိ ? ဒီဟာလေးစားရတာတော်တော့်ကို ခံတွင်းတွေ့တယ်။ ဂဏန်းချောင်းသားအိအိလေးကို အပေါ်ယံကနေ ရေညှိဖတ်ကြွပ်ကြွပ်လေးအုပ်ကြော်ပေးထားတော့ ဝါးရတာစီးစီးညက်ညက်ကလေးနဲ့ တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပြီး ? ပင်လယ်စာရဲ့သဘာဝအရသာတွေကို ခံစားမိစေတယ်။ မိယောနိစ်နဲ့အရွက်လေးတွေပါ တွဲပေးထားတော့ ? မိယောနိစ်လေးနဲ့တို့စားလိုက် အရွက်ကလေးရောဝါးလိုက်နဲ့ ဟုတ်နေရောပဲ။ ?
ဂဏန်းပျော့တန်ပူရာလေးလည်း မဆိုးဘူးရော် ? အပေါ်ယံအခွံခွာပြီးသား ဂဏန်းခွက်လိုက်လေးကို တန်ပူရာကြော်ထားပေးတာက တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်။ ဂဏန်းအသားအပြည့်ပါတော့ အပေါ်ယံတန်ပူရာကိုဝါးနေရင်း ဂဏန်းသားနေရာရောက်ရင် ဝါးလို့ကိုမဝနိုင်ဘူး ? လျှာပေါ်အရသာတွေပျံဝဲပြီး ဖိုင်းနေရောပဲ။ တို့စားဖို့အတွက် ဂျပန်ငံပြာရည်အချိုလေးပေးထားတယ် ဒါပေမယ့်ချိုရဲရဲကြီးဖြစ်နေတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူးရယ်။ ဒီတိုင်းစားရတာပိုကောင်းတယ်။ ပါတဲ့ပမာဏကတော့ နည်းတယ်ရယ် ?
ပြည်ကြီးငါးချဉ်စပ်ကြော်လေးက ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်ရဲ့အချဉ်အရသာလေးကို အဓိကထားချက်ပေးထားပြီး ငရုတ်ပွရဲ့အနံ့မွှေးမွှေးလေးက စားချင်စဖွယ်ပိုဖြစ်စေတယ်။ ပြည်ကြီးငါးကလည်း အသားတင်းတင်းလေးနဲ့လတ်ဆတ်နေရောပဲ။ ပြည်ကြီးငါးဖတ်လေးတွေကို ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်အရည်လေးထဲက ဆယ်စားလိုက်တိုင်း အနှစ်အရသာလေးတွေပါ လျှာပေါ်ကပ်ပါလာပြီး ? ချဉ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ စားလို့တော်တော်မြိန်တယ် ?
စားခဲ့သမျှဆူရှီတွေထဲမှာတော့ ကြက်အူချောင်းလိပ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ ? ? အရင်စားဖူးတာက ကြက်အူချောင်းထမင်းလိပ်ဆို ထမင်းထဲမှာကြက်ဥချောင်းနဲ့အရွက်အသီးတွေလောက်ပဲ ထည့်လိပ်ပေးပေမယ့် ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ ကြက်အူချောင်းနဲ့အရွက်တွေကို ရေညှိဖတ်လေးတွေနဲ့ အရင်ထည့်လိပ်ပြီး အပေါ်ယံကနေကြက်ဥဖတ်လေးနဲ့ ပြန်လိပ်ပေးထားတော့ အဆိမ့်အရသာပိုထွက်ပြီး ဝါးရတာထူထူကျစ်ကျစ်လေးဖြစ်နေရော ကြက်အူချောင်းလေးကလည်း ထုတ်ထုတ်လေးဆိုတော့စားပြီးရင်းကို ထပ်ထပ်စားချင်နေရောပဲ ?
ဂျပန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထမင်းဆက်ကတော့ ? ? ပုံမှန်ဆိုကြက်သားအပြင် ကြက်သားကြော်တစ်ပွဲပါထည့်ပေးပေမယ့် ကိုယ်တွေကအသားနဲ့မစားချင်တော့ ကြက်သားအစားအရွက်သုပ်တစ်ပွဲ အစားပေးတယ်။ ရာမန်အရည်ကိုလည်း ပျစ်ပျစ်ကြီးမဟုတ်ဘဲ ကြက်ပြုတ်ရည်လေးနဲ့ပဲ မြန်မာခံတွင်းနဲ့လိုက်အောင် ချက်ပြုတ်ပေးထားတော့ အရမ်းကြီးမကြိုက်ပေမယ့် စားလို့ကောင်းတယ်။ ဂျပန်ရာမန်ကြိုက်တဲ့သူတွေခံတွင်းနဲ့တော့ လုံးဝကွက်တိကျမှာပါ။ ?
ဝက်ကင်ချိစ်လိပ်ကတော့ ထင်သလောက်ကြီးမကောင်းဘူးရယ်။ အသားကင်ကသိပ်မကျက်လို့လားတော့မသိ ညှီနံ့နည်းနည်းရတယ်။ မင်မင့်အကြိုက်နဲ့တော့ ထပ်တူမကျဘူး ? စားရတာသိပ်မထိမိလှဘူး။
ဂဏန်းချောင်းကြော်ကြော်ကြက်ဥလိပ်လေးလည်း တော်တော်ဖိုင်းတယ်။ ဂဏန်းအသားပြည့်ပြည့်လေးကို ရေညှိဖတ် ၊ ဆလပ်ရွက် ၊ ကြက်ဥဖတ်လေးတွေနဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးနဲ့လိပ်ပေးထားတာ တော်တော်လေးဂွတ်တယ်။ ?
ပုဇွန်မိယောနိစ်ကတော့ ပုံမှန်စားနေကျအရသာလိုပဲ ။ ပုဇွန်လေးတွေကို ပါးပါးလေးတွေလှီး မိယောနိစ်နဲ့ရောနယ်ပြီး ထမင်းလိပ်လေးပေါ်တင်ပေးထားတာဆိုတော့ အရမ်းကြီးမထူးခြားဘူး ။ ထူးခြားတာက ဂဏန်းသားတွေအပုံကြီးတင်ပေးထားတာပဲ ။ မယုံရင်ပုံလေးထဲမှာသာ ရှိုးလိုက်တော့ ကိုယ့်လူ ?
စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်ကိုတော့ သိပ်ဘဝင်မခိုက်ဘူးရော် ? အအီပြေချဉ်ချဉ်လေးသောက်ချင်တာကို နို့အရသာတွေအားကြီးထည့်ထားတော့ တော်တော်ကြီးအီသွားရော ? ရှယ်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်ပေးထားပေမယ့် စတော်ဘယ်ရီအရသာပျောက်နေသလို ခံစားရတယ် ?
မင်မင်တို့စားတာ ဈေးတန်မတန် Bill လေးမှာသာကြည့်လိုက်တော့နော်
Ichiban မှာ စားသုံးသူတွေတအားများမနေပေမယ့် လူတော့မပြတ်ဘူးရယ်။ မင်မင်တွေ့သလောက်တော့ တန်ပူရာကြော်တွေကို အစားများကြတယ်။ အနော်ရထာလမ်းလိုနေရာမျိုးမှာဖွင့်ထားတော့ သွားလာရတာ အဆင်ပြေပေမယ့် ကားပါကင်တော့အဆင်မပြေဘူးရယ် ? ဒါပေမယ့် ဈေးတန်တန်လေးနဲ့ ဂျပန်စာလေးတွေ ၊ ဆူရှီလေးတွေကောင်းကောင်းစားရတော့ တန်ပါတယ်လေ ? အစားတစ်လိုင်းတို့လည်း ကိုယ်တိုင်သွားစားကြည့်ပြီး မင်မင်နဲ့အကြိုက်တူမတူ ဝေဖန်ပေးကြပါဦးနော်။ နောက်ထပ်လည်း အရသာထူးခြားတဲ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ညွှန်းပေးဦးမှာမို့ Foodiesnavi Facebook Page လေးကို Like ? လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် ?
Ichiban ဆိုင်ရဲ့ Menu လေးတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်လို့ရအောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ထမင်းကိုဟင်းတွေနဲ့ တွဲစားဖို့ရိုးအီလာပြီဆိုရင် ပသျှူးထမင်းကြော်လေး လုပ်စားကြည့်ပါ
(၁၀)မိနစ်အတွင်းအလွယ်တကူချက်ချင်းလုပ်စားလို့ရနိုင်မယ့်.. Hot Dog လုပ်နည်း